Semalt: WordPress Child Theme - Kutheni & Indlela Yokudala
Ngobomi bobubomi, abantwana bazuze abazuzi bazali, kwaye banokuzivumelanisa ngokuqhelekileyo imikhwa emihle kunye nemigudu yabantu. Ngexesha elifanayo, baneempawu ezizodwa ezingazange zinikwe ngumama okanye uyise. Unako ukuthetha okufanayo kunye neendaba ze-WordPress. Kuzo zonke iindatshana ze-WordPress ozikhuphelayo, ezithengayo okanye zokufaka, kukho umxholo wezingane ozuze ngefa kunye nowazi kakuhle ohambisana nezicwangciso zakho ezahlukeneyo - logiciel gratuit de gestion de projet informatique.
Nantsi ingqungquthela evela ku-Alexander Peresunko, ingcali ephezulu Semalt , kwindlela kwaye kutheni ukudala iintetho zomntwana kwi-WordPress.
Kutheni ukudala iNtloko yoMntwana:
Iingoma zomntwana zingaphaya kwaye zizuze iitemplates, izakhiwo, kunye nezitayela zezihloko zabo zabazali. Kwi-WordPress, iNtloko yoMntwana ikhona ngokuzimeleyo kodwa isebenzisana neemahla zomzali ukwenza uluhlu olubanzi lwemisebenzi. Kuxhomekeke kumzali kwaye inokusetyenziswa kuphela xa umxholo womzali efakwe kwaye usebenza kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress. Ngenkathi udala umxholo womntwana, kufuneka ugcine engqondweni izinto ezimbini ezibalulekileyo:
Kufuneka ungeze ulawulo olutsha kwifolda negama lomxholo wakho womntwana.
Ifayile yeefayile.css kwirekhodi entsha kufuneka ifakwe ngolwazi oluthile lwenkcazelo.
Emva kokuba udale umxholo womntwana, uya kuphawula ukuba unolwazi olufanayo njengengqikithi yomxholo womzali. Esinye isizathu sokuba ufune ukudala izihloko zabantwana kukuba baxelela i-WordPress ukuba izihloko ezibazali zifanelekile kwiiwebhusayithi ezithile.
Indlela yokudala iNtloko yoMntwana:
Unokwenza kalula umxholo womntwana ngokugcina engqondweni ngamaphuzu alandelayo.
1. Yongeza ulawulo olutsha lomnatha kwaye Hlela iifayile ze styles.css
Isinyathelo sokuqala ukufaka ulawulo olutsha kumxholo wakho okhoyo kunye negama lomxholo wakho womntwana kwaye ulungelelanise izicwangciso zalo. Ibaluleke kakhulu, kwaye akufanele wenze nantoni na izitayela Ifayile ifayile ikhona kwiCandelo leNtloko ye-WordPress yakho kwaye inolwazi oluthile malunga nesiza sakho, indawo yaso kunye nomxholo wayo. Ingxaki kuphela kukuba ulwazi lwentloko yalo ayikwazi ukuba Ulungelelwano olukhawulezileyo, nangona kunjalo, ukuba unokwazi okuthile malunga nezo zinto ziphazamisekile, ungafaka ikhowudi ethile kwi-header section yendaba yakho.
2. Ukuhlela Umxholo wabazali
Kufuneka uhlele kakuhle umxholo womzali uze wazi konke malunga nezitayela zalo ngelixa udala umxholo womntwana kwi-WordPress. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, akukho zindlela ezichanekileyo, kwaye ngenxa yokuba izihloko zomzali zineendlela ezingapheliyo. Nangona kunjalo, ungazihlela ngokuzilungisa uze uhlole ii-interwebs iziphumo ezingcono kumxholo wakho wengane.
3. Ukongeza ifayile yefayile.php
Ukuba ufuna ukufaka ifayile yeemisebenzi.php kumxholo wakho womntwana ukuyenza ibonakale ibhetele kunaphambili, kufuneka ufake ikhowudi ethile kwaye uhlele izicwangciso zomxholo wakho. Ngoku siyazi into esiyifunayo ukuyenza kunye nezingane zethu kunye nokutshisa. Inxalenye engcono kukuba le mixholo kulula ukuyilungisa kwaye iyakwenza ngokwezifiso, ifakwe kwaye ifakwe naliphi na ixesha. Ukongeza, unokongeza iinketho ezintsha kumxholo womntwana ngokusekelwe kwiimfuno zakho, kodwa sincoma ukuba ungahlaziyi nayiphi na ikhowudi okanye utshintshe izicwangciso zomxholo wengane ngenxa yokusetyenziswa kwayo okuncinciweyo kunye nokukhetha.
Izinto ezintathu ezonwabileyo zokwenza ngeencwadana zabantwana
Ngoku uyazi izinto ezisisiseko somxholo wakho womntwana kwaye unokuzenza izinto ezilandelayo kumnandi kunye nayo
1. Yongeza Izinketho ezintsha kwi-Customizer yayo - Ungakwazi ukongeza kalula iinketho ezintsha kwi-customizer yayo kwaye uza kubona ukuba zonke izixhobo zivela kumxholo womzali.
2. Yongeza Izilwanyana Zezithuba Zomthumo - Ukuba usebenzisa i-WooCommerce, unokufuna ukufakela itemplates yomkhiqizo wesiko kumxholo wakho womntwana ukunika ubonakala obukhangayo. Yongeza kumxholo womntwana uqinisekisa ukuba awuyi kulahleka ikhowudi xa umxholo womzali uhlaziya ngokwawo.
3. Ukugqithisa i-Layouts yehloko yomzali - Kufuneka ukhulule ukubeka iiflates kumxholo womzali. Enye yezona ndlela ezifanelekileyo kunye nezona zilungele ukukwenza oko kukukopisha itemplate evela kumzali kumxholo womntwana kwaye uqale ukuyikhetha ngokusuka apho.